"Isikolo esidala" Agritourism
Ifama sinombuki zindwendwe onguJulita
Indawo ekhethekileyo, ebekwe kumda wempucuko ... entliziyweni yeKrajeński Landscape Park - ngasechibini, phakathi kwamasimi, amadlelo kunye namahlathi (ngaxeshanye!), Apho emini uya kukhatshwa kuphela izandi endalo kunye nobomi yasemaphandleni (ezi hum ukuba itrektara isandi lali! :)), kwaye isibhakabhaka ebusuku iya ekwezi iinkwenkwezi ngendlela badubula iMilky.
Siyakumema ukuba uhlale kwindlu exhotyiswe ngokupheleleyo kwaye wonwabele ubuhle bendawo yasemaphandleni yokwenyani.
Kuphela kwabo bafuna uxolo (akukho pub, kodwa kukho iWiFi!)
"I-Stara Szkoła" ibekwe echibini, ijikelezwe ngamasimi, amadlelo kunye namahlathi. Iindwendwe zethu zinokusebenzisa ulwandle lwabucala olubekwe ngqo kwindlu enepier kunye neleli, sebenzisa izixhobo zamanzi (i-kayak, isikhephe esinemoto yombane ethuleyo), uye kwihlathi elikufutshane elikufutshane ukuya kukhangela amakhowa, hamba uhambo lokunyuka intaba. iinzulu Krajeński Landscape Park - Ci kunye verve enkulu, kulula ukufumana beaver namagumbi, iindlwane intaka okanye imingxuma impungutye emahlathini ezikufuphi, ngubani owaziyo - mhlawumbi baya kufika kuyo nabemi bazo. Kufuphi "Isikolo esidala" kukho iindawo apho ukugrunjwa kuye kwaqhutywa iminyaka engaphantsi kwe-10, kwaye imiboniso inokuthakazelelwa kumboniso osisigxina we-Archaeological Museum e-Bydgoszcz.
Umbuki zindwendwe ngu- Julita
Ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho, siya kuba sikhona kwiSikolo esiDala, siya kukuvuyela ukubonelela ngeengcebiso kunye neengcebiso malunga nommandla, siya kuzama ukukunceda kwiimeko ezingxamisekileyo kwaye ngamaxesha siya kumema ukuba ube nekomityi. ikofu (okanye siya kukuvumela ukuba umenywe, ukuba uyafuna;))
Ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho, siya kuba sikhona kwiSikolo esiDala, siya kukuvuyela ukubonelela ngeengcebiso kunye neengcebiso malunga nommandla, siya kuzama ukukunceda kwiim…